High School Chemistry Backup | 360ed
Dat Thin Pone Chemistry
Follow these steps to use this High School Chemistry (Grade 10) App:
High School Chemistry (Grade 10) App ကိုသုံးနိုင်ရန် အောက်ပါအဆင့်များကိုလိုက်နာပါ။
Download Datthinpone High School Chemistry App
၁. Datthinpone High School Chemistry App ကို Download ဆွဲပါ။
Download Datthinpone Chemistry Online Version (BETA)
minimum requirements for online version - android version 6.0 marshmallow
Scan these cards and enjoy studying chemistry with 4D models.
ဗူးမှ အခွား AR ကတျမြားကို Scan ဖတျကာ လလေ့ာလိုလြှငျActivation Code ကို Scan ဖတျဖို့လိုအပျမှာဖွဈပါတယျ။
ရောင်စုံပုံများ၊ ဂရပ်ဖစ်ပုံများ၊မြန်မာ ဘာသာဖြင့်ရှင်းပြထားသော အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်များ၊ သင်ခန်းစာများ၊ အင်္ဂလိပ်အသံထွက်များနဲ့အတူ Grade (10) Chemistry မှ Chapter (1) ကို နမူနာအဖြစ်လေ့လာသင်ယူနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Chapter section မှ သူနှင့်သက်ဆိုင်သော လေ့ကျင့်ခန်းများ၊ videos များနှင့် features များကို သွားရောက်နိုင်အောင် လင့်ခ်ချိတ်ပေးထားသော features များကိုလည်း စမ်းသပ်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Practice chemistry questions based on and divided by each concept and topic, not by chapter. You will experience different questions types to practice in accordance with Matriculation Examination question form.
Watch the animated video of Chemical Bond with Myanmar Narration. Bonus: you can download and save it.
Chemical Bond အကြောင်းကို မြန်မာနောက်ခံစကားပြောနှင့်အတူရှင်းပြထားသော Animated Video လေးကို ကြည်ရှု့နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Download ဆွဲထားပြီးလည်း ဖုန်းထဲမှာ သိမ်းထားနိုင်ပါသေးတယ်။
→ (To watch the other videos, you will need to activation code and scan it.)
(အခြား Videos များကို လေ့လာလိုလျှင် Activation Code ကို Scan ဖတ်ဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Activation Code ၀ယ်ယူရန် လင့်ခ်………………….)
Periodic Table Section
Study and explore the elements through periodic table.
ဒီ Periodic table လေးမှ တစ်ဆင့် ဒြပ်စင်တွေအကြောင်းကို စူးစမ်းလေ့လာကြပါစို့။